Sezar Yaung Chi HIV / AIDS Existence Centre - S.E.C
Sezar Yaung Chi HIV / AIDS Existence Centre - S.E.C မှာ မိမိ တက်နိူင်သမျှ ကုသိုလ်ယူ ပါဝင် လှူဒါန်း နိူင်ပါတယ်
ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်၊ ဘဝရဲ့ နေဝင်ချိန်​ရောက်​ရှိ​နေပြီလားဟု စိတ်​အ​တွေး​ဝင်​ကာ အား​လျှော့နွမ်းလျ​နေသူ​လေး​တွေကို စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် လူချင်းတူတူ သူချင်းမျှမျှ နေထိုင်ကာအသက်​ဆက်​နိုင်​ပါစေ ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ဆည်းဆာရောင်ခြည် ဆိုတဲ့ HIV ဝေဒနာရှင်များ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာ ကို (၂၀၁၂)ခုနှစ် (၉) လပိုင်းမှ စတင်၍ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားမှ ရုန်းကန်လှုပ်ရှား သည်းခံ မေတ္တာထား၍ (ယခုလည်းအခက်အခဲများကြားမှ) ဖွင့်လှစ်လာခဲ့တာဆိုလျှင်ဖြင့် (၅) နှစ်ကို ကျော်လွန်၍ (၆) နှစ်ဆိုသော အချိန်အတောအတွင်းကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။
ထို (၅) နှစ်ကျော် (၆) နှစ်အတွင်း (ထို) ဝေဒနာရှင်များ၏ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး အတွက် (မင်းတို့) ဆည်းဆာရောင်ခြည် က ဘယ်လိုများရပ်တည်သလဲ ဟု မေးကြပါလိမ့်မည်...?
ဆည်းဆာရောင်ခြည် နှင့် ဝေဒနာရှင်များအပေါ် စေတနာထားကြသော အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းကြသော အလှူငွေများ၊ အလှူပစ္စည်းများ ဖြင့် ရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုအလှူရှင်များ၏ စေတနာ၊ မေတ္တာများဖြင့် ဆည်းဆာဝေဒနာရှင်များ အသက်ဆက်၍ လောကအလယ်၌ မပူမပင်၊ ​မကြောင့်မကြ နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆည်းဆာရောင်ခြည် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဝေဒနာရှင်များအတွက် လုပ်ပေးချင်သော စေတနာမေတ္တာသာ ထက်သန်၍ ကြွယ်ပိုးကြွယ်ဝများမဟုတ်ကြပါ။
ဆည်းဆာရောင်ခြည်က ဝေဒနာရှင်များကို ဘာလုပ်ပေးသလဲ.....?
ဆည်းဆာရောင်ခြည် သည် ဝေဒနာရှင်များအတွက် နေရေး၊ ထိုင်ရေး၊ စားရေး၊ သောက်ရေးစတဲ့ လူ့ဘဝ၌ အခြေခံ အကျဆုံးဖြစ်သော စားဝတ်နေရေးအတွက် တာဝန်ယူပေးသည့် အပြင်
နို့စို့အရွယ် ကလေးငယ်များကို နို့မှုန့် တိုက်​​ကျွေး​ပေးခြင်း၊
ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးငယ်များအား ကျောင်းထား​ပေးခြင်း၊ အလုပ်​အကိုင်​လိုအပ်​​နေသူများကို သင့်​ရာအလုပ်​ရှာ​ဖွေ​ပေးခြင်း၊ ​ဆေးကုသခံယူဖို့လိုအပ်​​နေသူများအတွက် ဆေးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင် အ​ခြေအ​နေအရ အသက်​ဆုံးပါးရသူများရှိလာပါကလည်း ကောင်းမွန်​စွာ သင်္ဂြိုလ်​​ပေးခြင်းအတွက်ပင် တာဝန်ယူ၍ ဆောင်ရွက်ပေး​နေပါ၏။
ထို့ကြောင့် ဆည်းဆာရောင်ခြည်သည် ဝေဒနာရှင်များ၏ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး အပြင် ပညာရေး၊ ဘဝရပ်​တည်​​ရေးနှင့် သေရေးအတွက်ပါ တာဝန်ယူပေးပါ၏။
ထိုသို့တာဝန်ယူနိုင်အောင်လည်း ဆည်းဆာရောင်ခြည် သည် အလှူရှင်များအား အထူးပင် အားကိုးလျှက်ရှိပါ၏။
အိမ်ထောင်စုတစ်ခု၌ မိသားစု (၅)ဦး ရှိသည်ဆိုလျှင်ပင် ထို (၅)ဦး၏ စားဝတ်နေရေး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမူ​ရေး စသော အရေးကိစ္စများ အတွက် တစ်နေ့တာ ကုန်ကျငွေသည် မနည်းပေ။
ယခုဆည်းဆာဂေဟာ၌ ဝေဒနာရှင် (၂၁) ဦးရှိပေ၏။
ဒီကြားတည်းမှာ တိုးလျှင်လည်း တိုးလာနိုင်ပေသေး၏။
ထို (၂၁) ဦး၏ တစ်နေ့တာ ကုန်ကျငွေမှာလည်း မနည်းပေ။
ထို့အတွက်ကြောင့် အလှူရှင်များအား အားကိုးသမှုဖြင့် ဆည်းဆာနှင့် အတူ ကုသိုလ်ပြုရန် ဖိတ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါ၏။
ဆည်းဆာကိုလှူဒါန်းလိုလျှင် ဝေဒနာရှင်များအတွက် ထမင်းတစ်ရက်စာအတွက်​​သော်​လည်း​ကောင်း၊အဝတ်အထည်များနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ​သော်​လည်း​ကောင်း၊
ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်၊ အာလူး၊ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ၊ ပဲအမျိုးမျိုး စသည့် မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများ​သော်​လည်း​ကောင်း၊ ဝေဒနာရှင်များ ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ ဆေးသွားထုတ်သည့်အခါ ကုန်ကျသည့် လမ်းစားရိတ်အတွက်​​သော်​လည်းကောင်း လှူဒါန်း၍ရသကဲ့သို့
ဂေဟာရှိ ကလေးငယ်များအတွက် နို့မှုန့် လှူဒါန်း၍ရသလိုကျောင်းနေအရွယ် ကလေးငယ်များ အတွက် ကျောင်းအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ လှူဒါန်း၍ရသည့်အပြင်ဆည်းဆာဂေဟာရှိ ဝေဒနာရှင်များ စိတ်လက်ကြည်သာစွာဖြင့်နေထိုင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆောက်လုပ်မည့် ဆည်းဆာ (၂)ထပ်ဆောင်ကြီး အတွက်လည်း လှူဒါန်း၍ရပေ၏။မည်သည့်အတွက်လှူလှူ၊ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်လှူလှူ အလှူရှင်များအား ဆည်းဆာရောင်ခြည် မှ လှိုက်လှဲစွာဖြင့် စောင့်မျှော်နေပါ၏။
ပရဟိတမိခင်ကြီး မဟာဂရုဏာရှင်ကြီး မာသာထရီဇာက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘုမသိ၊ ဘမသိနှင့် မျက်ရည်ကျနေတဲ့သူတွေ အများကြီးဟု ဆိုခဲ့ဖူးရာ သည်လို ဘုမသိ၊ ဘမသိနှင့် မျက်ရည်ကျနေရသူအချို့၏ သောကကို ကုစားဖို့ရာ ဆည်းဆာရောင်ခြည်က မိမိတို့နိုင်သည့်ဖက်မှ ဆောင်ရွက်နေပါ၏။မိတ်ဆွေများသည်လည်း ဆည်းဆာရောင်ခြည်နှင့်အတူ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ပါဦးဟု ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
ဆည်းဆာရောင်ခြည် ကို လှူဒါန်းလိုသည်ဆိုပါလျှင်ဖြင့်
အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များထံတွင် ဆက်သွယ်၍ သော်လည်းကောင်း၊
ပူးတွဲဖော်ပြပါ ဘဏ်အကောင့်မှ တစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း
Sezar Yaung Chi HIV / AIDS Existence Centre - S.E.C Page မှ ကူးယူ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်
အမှတ်(၁၆၅) ၊စွယ်တော်(၃)လမ်း ၊(၁၉)ရပ်ကွက်၊ မြေတိုင်း(၄၈)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။